(၂၀၂၁) ကမ္ဘာလူငယ်များနေ့အတွက်ကျင်းပရန် သီချင်း နှင့် စိန်ခေါ်ချက် | Radio Veritas Asia
(၂၀၂၁) ကမ္ဘာလူငယ်များနေ့အတွက်ကျင်းပရန် သီချင်း နှင့် စိန်ခေါ်ချက်
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကက်သလစ်လူငယ်များသည် (၂၀၂၁) ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ကို မိမိတို့၏ နိုင်ငံအတွင်း၌ တတ်နိုင်သလောက်ကျင်းပကြရန် ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်၏ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို တုန့်ပြန် ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့၏ သီချင်းမှာ ‘“Jesus Said to Me: 'Levanta-te! Levántate! Get Up!' (ထလော့) ဟုအမည်ပေးထားကြောင်း ကမ္ဘာလူငယ်များ နေ့ကျင်းပရေး တွဲဖက်တာ၀န်ခံဖြစ်သူ HUGO FLORES ARCEGA ကပြောကြားခဲ့သည်။ ‘ရေးစပ်ထားသောသီချင်းသည် ရဟန်း မင်းကြီး ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းချက်သို့ ဆက်နွယ်သွားစေပါသည်။
ထို့အတူ ကပ် ရောဂါဆိုးကြီးကြုံတွေ့နေရချိန်၌ လူငယ်များ ကြောက်အားပို၍ရှောင်တိမ်းပုန်းခို မနေဘဲ ရဲ၀ံ့စွာ ထွက်ကြွ၍ မိမိတို့လုပ်နိုင်သည်များကို အကာအကွယ်ကောင်းစွာယူ၍လုပ် ဆောင်ကြ ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အလွန်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်ချက်ကို ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းနေရကြောင်း၊ သို့သော် ကြောက်ရန် မလို။ ဘုရားသခင်သည် အနီးအပါး၌ရှိနေသည်။ ယေဇူးသခင်သည်လည်း ဤနေရာ၌ရှိ နေပြီး၊ ‘ထလော့’ ဟုမိန့်ကြားနေပါ သည်’ ဟုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့သည်။
ဤသီချင်းကို လာမည့်နို၀င်ဘာလ ‘ခရစ္စတူးဘုရင်’ ပွဲနေ့၌တင်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ အားဖြင့် ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီး သီးရှိ သာသနာများအားလုံးအနေဖြင့် (၂၀၂၃) ခုနှစ် Lisbon ၌ကျင်းပမည့် ကမ္ဘာလူငယ်များနေ့အတွက် ကြိုတင်၍ပြင်ဆင်ထား နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
သီချင်းကို အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ ဘာသာစကားများဖြင့်သီဆိုထားပြီး၊ ဂီတရသအမျိုးမျိုးကို ထည့်သွင်းရေးစပ်တီးခတ်ထားသည်။
ဂီတသည် လူငယ်များအတွက် အလွန်အခရာကျသည်။ ထို့အတူသာသနာအတွင်းလည်းအရေး ပါပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခေတ်ကာလနှင့်လည်း သဟဇာတဖြစ်စေရန်ကိုလည်း စဉ်းစားရသည်။ လူမှု ကွန်ရက်၌ လူငယ်များကြား ရေပန်းစားနေသော အ ကြောင်းအရာများကိုလည်လေ့လာရသည်။
လူငယ်အများပိုင်းသည် သီချင်းနှင့်အကကိုအလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ‘(၂၀၂၁) ကမ္ဘ့ာလူငယ်များနေ့၏စိန့်ခေါ်ချက်’ ဟုတံဆိပ်တပ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်။ (၂၀၂၁) ခုနှစ်၏ ကမ္ဘာ့လူ ငယ်များနေ့သည် လူငယ်များအတွက် ပျော်စရာကောင်းပြီးအခမ်းအနားကြီး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထို့အတူ ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့၏သီချင်းကပေးသောသတင်းစကားဖြစ်သော ‘ဘုရားသခင်သည် သူတို့နှင့်အတူ သာချိန်၌လည်းကောင်း၊ နာချိန်၌လည်းကောင်း ရှိနေမည်’ ဆိုသည်ကိုလက်တွေ့ခံစားနားလည်ပေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ သည်။